Windows 10: Paint and Screenshot updates များကို Microsoft Store တွင်ရနိုင်သည်
FR : https://www.hebergementwebs.com/windows-10/windows-10-les-mises-a-jour-de-paint-et-capture-d-ecran-seront-disponibles-sur-le-microsoft-store
EN : https://www.hebergementwebs.com/windows-10/windows-10-paint-and-screenshot-updates-will-be-available-on-the-microsoft-store
ES : https://www.hebergementwebs.com/windows-10/windows-10-las-actualizaciones-de-paint-y-screenshot-estaran-disponibles-en-microsoft-store
BE : https://www.hebergementwebs.com/вокны-10/windows-10-paint-and-screenshot-updates-will-be-available-on-the-microsoft-store
ET : https://www.hebergementwebs.com/aknad-10/windows-10-paint-and-screenshot-updates-will-be-available-on-the-microsoft-store
AF : https://www.hebergementwebs.com/vensters-10/windows-10-verf-en-skermkiekie-opdaterings-beskikbaar-in-die-microsoft-winkel
EU : https://www.hebergementwebs.com/leihoak-10/windows-10-paint-and-screenshot-updates-microsoft-dendan-erabilgarri-egongo-dira
HE : https://www.hebergementwebs.com/חלונות-10/windows-10-paint-and-screenshot-updates-will-be-available-on-the-microsoft-store
HR : https://www.hebergementwebs.com/prozori-10/windows-10-paint-and-screenshot-updates-will-be-available-on-the-microsoft-store
AM : https://www.hebergementwebs.com/መስኮቶች--10/windows-10-paint-and-screenshot-ዝመናዎች-በማይክሮሶፍት-መደብር-ላይ-ይገኛሉ
DE : https://www.hebergementwebs.com/windows-10/windows-10-paint-and-screenshot-updates-werden-im-microsoft-store-verfugbar-sein
FY : https://www.hebergementwebs.com/finsters-10/windows-10-ferve-en-skermofbylding-updates-sille-te-krijen-weze-op-e-microsoft-winkel
GD : https://www.hebergementwebs.com/uinneagan-10/windows-10-paint-and-screenshot-update-will-be-available-on-the-microsoft-store
GU : https://www.hebergementwebs.com/વિન્ડોઝ--10/વિન્ડોઝ-10-પેઇન્ટ-અને-સ્ક્રીનશ-ટ-અપડેટ્સ-માઇક્રોસ-.ફ્ટ-સ્ટોર-પર-ઉપલબ્ધ-થશે
HA : https://www.hebergementwebs.com/windows-10/windows-10-paint-da-screenshot-sabuntawa-za-samu-a-kan-kantin-micro-store
FA : https://www.hebergementwebs.com/windows-10/windows-10-paint-and-screenshot-updates-will-موجود-در-فروشگاه-مایکروسافت
BS : https://www.hebergementwebs.com/windows-10/windows-10-paint-and-screenshot-updates-update-will-be-available-in-the-microsoft-store
EL : https://www.hebergementwebs.com/παράθυρα-10/windows-10-χρώμα-και-στιγμιότυπο-οθόνης-ενημερώσεις-θα-θα-είναι-διαθέσιμο-στο-microsoft-store
EO : https://www.hebergementwebs.com/fenestroj-10/fenestroj-10-farbo-kaj-ekrankopioj-gisdatigoj-estos-haveblaj-ce-la-microsoft-butiko
GL : https://www.hebergementwebs.com/windows-10/windows-10-paint-and-screenshot-updates-will-have-available-on-the-microsoft-store
CA : https://www.hebergementwebs.com/windows-10/windows-10-paint-and-screenshot-updates-will-have-available-on-the-microsoft-store
DA : https://www.hebergementwebs.com/windows-10/windows-10-maling-og-screenshot-opdateringer-vil-være-tilgængelige-pa-microsoft-butik
FI : https://www.hebergementwebs.com/windows-10/windows-10-paint-and-screenshot-updates-will-be-be-available-on-the-microsoft-store
ID : https://www.hebergementwebs.com/windows-10/windows-10-paint-and-screenshot-updates-will-be-available-on-the-microsoft-store
AR : https://www.hebergementwebs.com/نوافذ-10/windows-10-paint-and-screenshot-updates-will-be-available-on-the-microsoft-store
BN : https://www.hebergementwebs.com/উইন্ডোজ--10/উইন্ডোজ-10-পেইন্ট-এবং-স্ক্রিনশট-আপডেট-মাইক্রোসফ্ট-স্টোর-এ-উপলব্ধ-হবে
BG : https://www.hebergementwebs.com/windows-10/windows-10-paint-and-screenshot-updates-will-be-available-on-the-microsoft-store
AZ : https://www.hebergementwebs.com/windows-10/windows-10-boya-və-ekran-goruntuləri-yeniləmələr-mikrosoft-magazasinda-movcud-olacaq
CO : https://www.hebergementwebs.com/windows-10/windows-10-paint-and-screenshot-updates-will-be-available-on-the-microsoft-store
CY : https://www.hebergementwebs.com/ffenestri-10/windows-10-paint-and-screenshot-update-will-be-available-on-the-microsoft-store
CS : https://www.hebergementwebs.com/windows-10/windows-10-paint-and-screenshot-updates-will-be-available-on-the-microsoft-store
HU : https://www.hebergementwebs.com/windows-10/a-windows-10-paint-and-screenshot-updates-elerheto-lesz-a-microsoft-aruhazban
HT : https://www.hebergementwebs.com/fenèt-10/windows-10-paint-and-screenshot-updates-will-be-available-on-the-microsoft-store
PT : https://www.hebergementwebs.com/windows-10/windows-10-paint-and-screenshot-updates-will-be-available-on-the-microsoft-store
PL : https://www.hebergementwebs.com/windows-10/windows-10-malowanie-i-zrzuty-ekranu-aktualizacje-beda-dostepne-w-microsoft-store
RU : https://www.hebergementwebs.com/окна-10/windows-10-краска-и-скриншоты-обновления-будут-будут-доступны-в-microsoft-магазине
RO : https://www.hebergementwebs.com/ferestre-10/windows-10-paint-and-screenshot-updates-will-be-available-on-the-microsoft-store
KO : https://www.hebergementwebs.com/윈도우-10/windows-10-paint-and-screenshot-updates-will-be-available-the-microsoft-store
NO : https://www.hebergementwebs.com/windows-10/windows-10-maling-og-skjermbilde-oppdateringer-vil-være-tilgjengelig-pa-microsoft-butikken
OR : https://www.hebergementwebs.com/ୱିଣ୍ଡୋ--10/ୱିଣ୍ଡୋଜ୍-10-ପେଣ୍ଟ-ଏବଂ-ସ୍କ୍ରିନ୍-ସଟ୍-ଅପଡେଟ୍ସ-ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ-ଷ୍ଟୋର୍‌ରେ-ଉପଲବ୍ଧ-ହେବ-|
NY : https://www.hebergementwebs.com/windows-10/windows-10-utoto-ndi-skrini-zosintha-zizipezeka-pa-sitolo-ya-microsoft
IG : https://www.hebergementwebs.com/windo-10/windo-10-paint-na-nseta-ihuenyo-mmelite-ga-enwe-na-na-na-na-microsoft-ụlọ-ahịa
NL : https://www.hebergementwebs.com/windows-10/windows-10-verf-en-screenshot-updates-zullen-beschikbaar-zijn-in-de-microsoft-store
RW : https://www.hebergementwebs.com/windows-10/windows-10-irangi-na-ecran-yerekana-ivugurura-izaboneka-kuri-microsoft-iduka
LT : https://www.hebergementwebs.com/langai-10/„windows-10-paint-and-screenshot-updates-will-be-available-on-the-microsoft-store“
MS : https://www.hebergementwebs.com/tingkap-10/windows-10-cat-dan-tangkapan-skrin-kemas-kini-akan-tersedia-di-microsoft-store
IT : https://www.hebergementwebs.com/windows-10/windows-10-paint-and-screenshot-updates-will-be-available-on-the-microsoft-store
MR : https://www.hebergementwebs.com/विंडोज--10/विंडोज-10-पेंट-आणि-स्क्रीनशॉट-अद्यतने-मायक्रोसॉफ्ट-स्टोअर-वर-उपलब्ध-असतील
LB : https://www.hebergementwebs.com/fënsteren-10/windows-10-paint-a-screenshot-updates-sinn-am-microsoft-store-verfugbar
SD : https://www.hebergementwebs.com/ونڊوز--10/ونڊوز-10-رنگ-۽-اسڪرين-شاٽ-اپڊيٽ-دستياب-تي-مائڪرو-سافٽ-اسٽور
IS : https://www.hebergementwebs.com/windows-10/windows-10-mala-og-skjamynd-uppfærslur-verða-faanlegar-a-microsoft-verslun
MT : https://www.hebergementwebs.com/twieqi-10/windows-10-paint-and-screenshot-updates-will-be-available-on-the-microsoft-store
KN : https://www.hebergementwebs.com/ವಿಂಡೋಸ್--10/ವಿಂಡೋಸ್-10-ಪೇಂಟ್-ಮತ್ತು-ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್-ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳು-ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್-ಸ್ಟೋರ್‌ನಲ್ಲಿ-ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ
PA : https://www.hebergementwebs.com/ਵਿੰਡੋਜ਼--10/ਵਿੰਡੋਜ਼-10-ਪੇਂਟ-ਅਤੇ-ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ-ਅਪਡੇਟਸ-ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾੱਫਟ-ਸਟੋਰ-ਤੇ-ਉਪਲਬਧ-ਹੋਣਗੇ
JA : https://www.hebergementwebs.com/ウインドウズ10/windows-10-paint-and-screenshot-updates-will-be-available-on-the-microsoft-store
LV : https://www.hebergementwebs.com/logi-10/windows-10-paint-and-screenshot-updates-will-be-available-on-the-microsoft-store
ML : https://www.hebergementwebs.com/വിൻഡോസ്--10/വിൻഡോസ്-10-പെയിന്റ്-സ്ക്രീൻഷോട്ട്-അപ്‌ഡേറ്റുകൾ-മൈക്രോസോഫ്റ്റ്-സ്റ്റോറിൽ-ലഭ്യമാകും
KA : https://www.hebergementwebs.com/ვინდოუსი--10/windows-10-საღებავი-და-ეკრანის-ანაბეჭდები-განახლდება-microsoft-ის-მაღაზიაში
PS : https://www.hebergementwebs.com/وینډوز-10-10/د-مایکروسافټ-پلورنځي-کې-د-وینډوز-10-میټ-پینټ-او-د-سکرین-شاټ-تازه-معلومات-به-شتون-ولري
MN : https://www.hebergementwebs.com/windows-10/windows-10-будаг-ба-скриншотын-шинэчлэлтүүд-microsoft-дэлгүүрт-бэлэн-байх-болно
KK : https://www.hebergementwebs.com/windows-10/windows-10-бояу-және-скриншот-жаңартулар-microsoft-дүкенінде-қол-жетімді-болады
KY : https://www.hebergementwebs.com/windows-10/windows-10-боёк-жана-скриншот-жаңыртуусу-microsoft-дүкөнүндө-жеткиликтүү-болот
ZH-TW : https://www.hebergementwebs.com/windows-10/windows-10-繪畫和屏幕截圖更新將在microsoft商店中提供
TR : https://www.hebergementwebs.com/windows-10/windows-10-boyama-ve-ekran-goruntusu-guncellemeleri-microsoft-magazasinda-kullanima-sunulacak
SK : https://www.hebergementwebs.com/okná-10/windows-10-paint-and-screenshot-updates-will-be-available-on-the-microsoft-store
VI : https://www.hebergementwebs.com/windows-10/windows-10-paint-and-screenshot-update-will-be-available-on-the-microsoft-store
SW : https://www.hebergementwebs.com/windows-10/windows-10-rangi-na-skrini-sasisho-zitapatikana-kwenye-duka-la-microsoft
UK : https://www.hebergementwebs.com/вікна-10/windows-10-paint-and-screenshot-updates-will-be-available-on-the-microsoft-store
YO : https://www.hebergementwebs.com/windows-10/windows-10-paint-and-screenshot-updates-yoo-wa-lori-ile-itaja-microsoft
SQ : https://www.hebergementwebs.com/dritare-10/windows-10-boje-dhe-perditesimet-e-pamjes-nga-ekrani-do-te-jene-ne-dispozicion-ne-dyqanin-e-microsoft
SO : https://www.hebergementwebs.com/daaqadaha-10/windows-10-rinji-iyo-shaashad-cusbooneysiin-ah-ayaa-laga-heli-doonaa-dukaanka-microsoft-
TH : https://www.hebergementwebs.com/windows-10/windows-10-paint-and-screenshot-updates-will-available-on-the-microsoft-store
ST : https://www.hebergementwebs.com/lifensetere-10/windows-10-pente-le-skrini-lintlafatso-li-tla-fumaneha-lebenkeleng-la-microsoft
ZU : https://www.hebergementwebs.com/amafasitela-10/amawindows-10-paint-and-screenshot-updates-azotholakala-esitolo-se-microsoft
SL : https://www.hebergementwebs.com/windows-10/windows-10-paint-and-screenshot-posodobitve-bodo-na-voljo-v-microsoftovi-trgovini
SV : https://www.hebergementwebs.com/windows-10/windows-10-mala-och-skarmdump-uppdateringar-kommer-vara-tillgangliga-i-microsoft-butik
TT : https://www.hebergementwebs.com/windows-10/windows-10-буяу-һәм-скриншот-яңартулар-микрософт-кибеттә-булачак
TE : https://www.hebergementwebs.com/విండోస్--10/విండోస్-10-పెయింట్-మరియు-స్క్రీన్-షాట్-నవీకరణలు-మైక్రోసాఫ్ట్-స్టోర్లో-లభిస్తాయి
XH : https://www.hebergementwebs.com/windows-10/windows-10-ipeyinti-kunye-skrini-uhlaziyo-luya-kufumaneka-kwi-microsoft-ivenkile
TG : https://www.hebergementwebs.com/windows-10/windows-10-ранг-ва-скриншот-навсозӣ-дар-мағозаи-microsoft-дастрас-хоҳад-буд
UZ : https://www.hebergementwebs.com/windows-10/windows-10-bo-yoq-va-skrinshot-yangilanishlar-mosoft-do-konida-mavjud-bo-ladi
Paint သည် Windows သို့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းလိုက်သော
Windows 10 ၏နောက်ဆုံးအကြိုမြင်ကွင်းသည် features အသစ်များနှင့်မကိုက်ညီပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ Microsoft သည်အစဉ်အလာအားဖြင့် Windows နှင့်တင်ပို့။ operating system နှင့်အတူမွမ်းမံထားသော၎င်း၏ Paint (သို့မဟုတ် MSPaint) လျှောက်လွှာတွင်အချို့သောတိုးတက်မှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်မိုက်ကရိုဆော့ဖ်၏ Paint ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုရပ်တန့်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် application ၏ "ပရိသတ်များ" ၏ ၀ မ်းနည်းဖွယ်ရာအဖြစ်အပျက်ကိုပင် ၀ င်းဒိုး ၁၀ ၏ "အနာဂတ်ဗားရှင်းများတွင်ဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်" ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင်၎င်းသည်၎င်း၏ဆက်ခံသူဖြစ်သော 3D Paint ကိုအာရုံစိုက်လိုသည်။
ဒါပေမယ့်ဆူညံသံပြီးနောက်ယေဘူယျအားဖြင့်မိုက်ခရိုဆော့ဖ်အနေဖြင့်သင်တန်းကိုပြောင်းလဲပြီး Paint Store ၌ဆက်လက်တည်ရှိရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Windows 10 နှင့်ထပ်မံပေါင်းစည်းခြင်းမရှိတော့ပါ။ ထို့နောက် 2019 ခုနှစ်တွင်နောက်ထပ်အစီအစဉ်များပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်သည် - ဂန္ထဝင် application သည် Windows ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ Windows 10. ၏ဗားရှင်း 1903 10.
Microsoft Store မှတဆင့်အသစ်ပြောင်းခြင်း blog post အသစ် တွင် Microsoft က The Paint application သည်ယခုဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည် အဓိကလည်ပတ်မှုစနစ်၏နောက်ဆုံးသတင်းများအပြင် Microsoft Store မှတစ်ဆင့် update လုပ်နိုင်သည်။ လူတိုင်းအတွက် Microsoft စတိုးတွင်မရရှိနိုင်ပါက
သုတ်ဆေးသည်မိုက်ခရိုဆော့မှပြန်လည်ဒီဇိုင်းဆွဲသောအိုင်ကွန်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်အိုင်ကွန်အသစ်တစ်ခုကိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ (ကျွမ်းကျင်ဒီဇိုင်း) ။ Paint menu ကို Start menu တွင်လည်းမြှင့်တင်လိမ့်မည်။
"Capture and Sketch" tool ကိုပေါင်းပြီးဖန်သားပြင်အကန့်ရိုက်ချက်များကိုခွင့်ပြုသည့်စခရင်ရိုက်ကူးမှု - ကိုလည်း Microsoft Store မှအသစ်ပြောင်းမည်။အဓိက Windows 10 ၏နောက်ဆုံးသတင်းများအရသိရသည်။ ဤ tool သည် "Capture and Sketch" နှင့်အတူတစ်ချိန်တည်းအတွက် update များကိုတစ်ပြိုင်တည်းထောက်ပံ့နိုင်အောင်စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Start menu မှတည်နေရာအသစ်တစ်ခုမှလည်းအကျိုးရှိလိမ့်မည်။
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် Dev channel မှာ Insiders အတွက် Build 21354 ၏ကြိုတင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှုသည်ရွေးချယ်စရာအသစ်များပါဝင်သည်။ အကျိုးစီးပွားအပေါ်အခြေခံပြီး feed ကိုစိတ်ကြိုက်ရန်။ taskbar ရှိမိုးလေဝသကဏ္ section ကိုကျော်။ “ Manage interest” ခလုတ်ကိုပြပြီးအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်၎င်းတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာများကိုသတ်မှတ်ခွင့်ပြုသည့်စာမျက်နှာတစ်ခုသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ သုံးစွဲသူများသည်မိုက်ခရိုဆော့ဖ်၏မီဒီယာမိတ်ဖက်များနောက်သို့လိုက်ရန်ခွင့်ပြုရန် "ကျွန်ုပ်၏စိတ်ဝင်စားမှုများ" စာမျက်နှာ၏ဘယ်ဘက်တွင် "ညှိရန်" ချိန်ညှိခြင်းကိုထပ်ထည့်ထားသည်။
ယခုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသောအင်္ဂါရပ်အသစ်များကိုယူအက်စ်အေအသုံးပြုသူများမှရရှိနိုင်ပါသည်။ ယူကေ၊ ကနေဒါ၊ အိန္ဒိယနှင့်Australiaစတြေးလျ။ ဒီမှာလည်း aအသုံးပြုသူများအား Windows 10 PC တွင်ရှေ့နှင့်နောက်ကင်မရာများတပ်ဆင်။ ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုသည့် "ချိန်ညှိချက်များ" အက်ပလီကေးရှင်းရှိ "Camera" ကဏ္ new သစ်ကိုဤအခန်းကို
Settings> Devices> Camera
တွင်တွေ့နိုင်သည်။ "Configure" ခလုတ်သည်သင့်အားပုံမှန်အလင်းနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုပြောင်းလဲရန်ခွင့်ပြုသည်။
Windows PC startup ကိုမြန်အောင်လုပ်နည်း
2021-04-18 07:09:43 | Windows 10
ကွန်ပြူတာများသည် beige yore သေတ္တာများနှင့်များစွာဝေးကွာသွားသော်လည်းအမြန်နှုန်းသည် gigahertz နှင့် gigabytes per စက္ကန့်လျှင်ပင်လျှင်ရံဖန်ရံခါစောင့်ဆိုင်းနေသည်။ သင်၏ကွန်ပျူတာကို boot တက်ရန်စောင့်နေစဉ်အတွင်း Rubik's Cubes များကိုဖြေရှင်းရန်သင်ငြီးငွေ့ပါကလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်ရန်နည်းလမ်းအချို့ကိုဤ...
သင်၏ Windows 10 File Explorer ဖြင့်သင်၏ဖိုင်များကိုစီမံရန်အတွက်အချက် ၁၀ ချက်
2021-04-18 05:33:32 | Windows 10
Windows 10 ရှိ File Explorer သည်နှစ်များတစ်လျှောက်ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဖိုင်များ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဓာတ်ပုံများနှင့်အရာများစွာတို့ကိုစီမံရန်၊ ကြည့်ရှုရန်နှင့်ဖွင့်ရန်ကူညီရန်ဖြစ်သည်။ သင် Windows 10 ကိုစတင်မိတ်ဆက်စဉ်ကတည်းကအသုံးပြုခဲ့လျှင်ပင် File Explo...
မေ့သွားတဲ့ Windows 10 password ကိုဘယ်လို reset လုပ်မလဲ
2021-04-12 20:04:10 | Windows 10
သင်၏ Windows 10 PC သို့ဆိုင်းအင်ဝင်ရန်လိုအပ်သော်လည်းသင်၏စကားဝှက်ကိုမေ့သွားသည်။ စိတ်မပူပါနှင့်; ၀ င်းဒိုး ၁၀ ကမေ့နေတဲ့စကားဝှက်ကိုမိုက်ကရိုဆော့ဖ်အကောင့်တခုခု (သို့) ဒေသခံအကောင့်တခုခုကိုအသုံးပြုနေတယ်ဆိုပါစို့၊ သို့သော်ဒေသဆိုင်ရာအကောင့်တစ်ခုအတွက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမေးခွန်းအချို့နှင့်အဖြေများကို ဦး စွာပြင်...
Windows 10: နောက်ဆုံးတွင် OneDrive ထပ်တူပြုခြင်း application အတွက် 64-bit version တစ်ခုဖြစ်သည်
2021-04-12 17:19:18 | Windows 10
Microsoft မှ Windows 10 အတွက် OneDrive file sync app ၏ 64-bit version ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး၎င်းကို Apple MacBooks များအတွက် 64-bit version နှင့်ညှိနှိုင်းခဲ့သည်။ 64-bit OneDrive ထပ်တူပြုခြင်း app ကို Public Preview အနေဖြင့်ယခုအချိန်တွင်ရရှိနိုင်သည်။ General Availability ဖြန့်ချိမှု၏ရင့်ကျက်မှုမရောက်ရှိ...
Windows 10 image file ကိုဘယ်လို backup လုပ်မလဲ
2021-04-06 11:21:27 | Windows 10
သင်၏ Windows 10 ပတ် ၀ န်းကျင်သည်အလွန်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများ၊ အကယ်၍ သင်သည်ဤအခြေအနေမျိုးတွင်ကြုံတွေ့ရပါက Microsoft မှအထူး backup feature တစ်ခုအားကယ်တင်နိုင်လိမ့်မည်။ system image backup ဟုလူသိများသောထို feature သည် folder 10 ကိုရွေးရုံထက် file 10 တစ်ခုလုံး image file တစ်ခုလုံးနှင့် file history နှင့်အ...
Windows 10 lock screen ကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ
2021-04-06 10:41:10 | Windows 10
Windows 10 မှာလုပ်နိုင်တဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပေမယ့် lock screen ကိုအရင်ကြည့်ရမယ်။ ၎င်းကိုနှိပ်ခြင်းသို့မဟုတ်နှိပ်ခြင်းကသင့်အား ၀ င်းဒိုးထဲသို့ ၀ င်ရောက်သည့် login မျက်နှာပြင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ၎င်းသည်မလိုအပ်ဟုထင်ရသော်လည်း lock screen တွင် operating system ကိုမဖွင့်မီကပင်အသုံးဝင်သောအချက်အလ...
2021-04-03 16:06:31 | Windows 10
MSI သည်ရဲရင့ ်၍ ခုန်ပေါက်သောဂိမ်းလက်တော့ပ်များကြောင့်လူသိများသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် Summit Series စီးပွားရေးလိုင်းအတွက်နောက်ထပ်ဖြည့်စွက်နှစ်ခုကိုကြေငြာခဲ့သည်။ Summit E13 Flip Evo နှင့် Summit E16 Flip တို့သည် Intel ၏ Tiger Lake ပရိုဆက်ဆာများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ပြောင်းပြောင်းနိုင်သောလက်တော့ပ်များဖြစ်သည်။ သတင်...
Windows 10: File Explorer အိုင်ကွန်များသည် ပို၍ ရောင်လာသည်
2021-03-25 23:28:40 | Windows 10
File Explorer - File: Credit: Windows File Explorer ထဲက icon တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ Recycle Bin, Documents folders နှင့် disk drives ကဲ့သို့သော Device များအပါအ ၀ င် File Explorer တွင်သင်တွေ့ရမည့် system icon များသို့ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ကုန်ပစ္စည်းမျာ...
Windows 10: File Explorer အိုင်ကွန်များသည်အရောင်ပြောင်းသည်
2021-03-25 21:04:24 | Windows 10
2021-03-22 20:42:16 | Windows 10
(Image: Getty) သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာကိုဖွင့ ်၍ တေးဂီတကိုဖွင့်သည်။ သို့သော်သင့်စပီကာများမှတဆင့်တေးဂီတဖွင့်မည့်အစားအခန်းတစ်လျှောက်ရှိသင်၏ဘလူးတုသ်နားကြပ်များမှတိတ်ဆိတ်စွာနေသည်။ အကယ်၍ သင်၏ပီစီသည်မှန်ကန်သောစပီကာများမှအသံမဖွင့်ပါကအမြန်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်၎င်းကိုနောင်တွင်ထပ်မံမဖြစ်စေရန်တားဆီးထားသည့်နည်းလမ်းတစ်ခ...
Windows 10 မွမ်းမံမှုအသစ်တွင်အချို့သောပရင်တာများသည်ကွန်ပျူတာများကိုပျက်စီးစေသည့်ပြissueနာကိုဖြေရှင်းခဲ့သည်
2021-03-18 06:41:26 | Windows 10
Microsoft ကအောက်ပါပြtheနာကိုဖြေရှင်းသည်။ အချို့သောပရင်တာများအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏ Windows 10 ကွန်ပျူတာကိုအပြာဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာစေလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင် (သို့မဟုတ်သင်၏အိုင်တီဌာန) သည်ထိုပြexperiencedနာကိုကြုံတွေ့ခဲ့ပါကယနေ့မွမ်းမံမှုကသင့်အားပုံနှိပ်ခြင်းကိုပြန်လည်စတင်ရန်ခွင့်ပြုသင့်သည်။ ဖြန့်ချိသည့်မ...
သင်၏ Windows 10 display ကိုမည်သို့ပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်သည်
2021-03-17 05:33:33 | Windows 10
သင်၏ Windows 10 မျက်နှာပြင်သည်အတော်လေးမှန်ကန်ပုံမပေါ်ပါ။ စာသားသည်အလွန်သေးငယ်လွန်း။ ကြီးလွန်းနိုင်သည်။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကသင့်အတွက်မမှန်ပါ။ ဒီတစ်ခါလည်းအရောင်ချွတ်ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့; စာသားကိုအရွယ်အစားပြောင်းလဲခြင်း၊ resolution ပြောင်းလဲခြင်း၊ အရောင်ချိန်ညှိခြင်းနှင့်အခြားအရာများစွာပြုလုပ်ခြင်...
မိုက်ကရိုဆော့ဖ်၏အနေဖြင့် 3D မြင်ကွင်းတပ်ဆင်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်နှင့် Windows 10 ဖြင့် 3D ပန်းချီဆွဲခြင်းအားရပ်ဆိုင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်
2021-03-16 02:40:39 | Windows 10
Photo: Microsoft Microsoft သည်ပုံမှန်အားဖြင့် Windows 10 အသစ်စက်စက်ဖြင့်အက်ပလီကေးရှင်းများစွာကိုထည့်သွင်းထားသည်၊ များစွာသောအားဖြင့်မည်သည့်အခါမျှအသုံးမပြုနိုင်တော့ပေ။ ကံကောင်းတာကဒီအက်ပလီကေးရှင်းနှစ်ခုကဒီစာရင်းမှကျဆင်းသွားမှာဖြစ်ပြီး၊ Windows ဘလော့ဂ်အတည်ပြုချက်အရ Windows 10 Insider Preview (21332) ရဲ့...
3D မြင်ကွင်းထည့်သွင်းခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီး Windows 10 ဖြင့်ပန်းချီဆွဲခြင်း
2021-03-16 00:20:17 | Windows 10
နောက်ဆုံးပေါ် Windows 10 update ကသင်၏ပရင်တာကိုသင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ပျက်စေနိုင်သည်
2021-03-14 00:43:27 | Windows 10
နောက်ဆုံးပေါ် Windows Update သည် Gizmodo မှတစ်ဆင့်အချို့သောပရင်တာပိုင်ရှင်များအတွက်ပြproblemsနာများဖြစ်စေသည်။ အသုံးပြုသူများမှ Notepad၊ Office သို့မဟုတ်အခြားပရိုဂရမ်များမှပုံနှိပ်ပေးသော dialog box ကိုဖွင့်ရန်ကြိုးစားသည့်အခါ ၄ င်းတို့သည်အပြာရောင်မျက်နှာပြင်ရရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ (သင်၏ကွန်ပျူတာသည်...